“Waa mid ka mid ah da’ayarta ugu fiican adduunka” – Jamie Carragher oo ammaan ugu qubeeyay Jadon Sancho – Gool FM
“Waa mid ka mid ah da’ayarta ugu fiican adduunka” – Jamie Carragher oo ammaan ugu qubeeyay Jadon Sancho
Dajiye February 14, 2020
(England) 14 Feb 2020. Xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa ku guuleystay inuu soo jiito dhamaan kooxaha waa weyn ee Yurub, kaddib bandhigiisii ​​cajiibka ahaa uu ka sameeyay naadiga reer Germany.
Jadon Sancho oo 19 jir ah ayaa ka dhaliyay 12 gool xilli ciyaareedkan horyaalka Bundesliga ee dalka Germany, wuxuuna caawiyay 13 kale, kaddib 21 kulan oo ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray Bundesliga.
Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa waxay tilmaamayaan in Jadon Sancho ay wada xiiseynayaan inay helaan adeegiisa kooxo ay ka mid yihiin Manchester United iyo Liverpool.
Haddaba daafacii hore kooxda kubadda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa wuxuu sheegay in Jadon Sancho uu yahay mid ka mid ah da’ayarta ugu fiican adduunka wuxuuna yiri:
“Sancho waa mid ka mid ah da ‘yarta ugu fiican adduunka, gaar ahaan marka aad eegto qiimeyntiisa kooxda Borussia Dortmund”.
“Waa ciyaaryahan England ah, waxaana u maleynayaa inuu aad u doonayo inuu soo laabto, marka waxaan u maleynayaa inuu noqon doono ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee kooxaha Premier League ay doonayaan inay la soo saxiixdaan”.
Intaas kaddib Jamie Carragher ayaa saadaaliyay guulaha uu Jadon Sancho ka soo hooyin karo horyaalka Premier League haddii ay dhacdo inuu yimaado wuxuuna yiri:
“Fiiri sida wanaagsan uu ugu ciyaaro horyaal weyn iyo koox weyn iyadoo uu jiro cadaadis, haddana rikooradiisa waa cajiib, da’adiisana waa mid aad u fiican”.
“Mar walba waa midka ugu fiican” – Tababaraha xulka qaranka Argantina oo difacay Lionel Messi
“Cristiano Ronaldo wuxuu ka mid yahay sababaha aan dib ugu soo laabtay Juventus” – Buffon